Qurba-joog U Dhalatay Deegaanka Oo Kormeer Indho Indhayn ah Ku Tagay Gobolka Qoraxey iyo Doolo - Cakaara News
Qurba-joog U Dhalatay Deegaanka Oo Kormeer Indho Indhayn ah Ku Tagay Gobolka Qoraxey iyo Doolo
Shilaabo(cakaaranews) Talaado 20ka June, 2017. Wafti balaadhan oo qurbajoog ah oo u dhalatay deegaanka gaar ahaan gobolka qoraxey iyo doolo islamarkaana uu horkacayo maareeyaha wakaalada xidhiidhka qurbajoogta DDSI mudane Badri Yuusuf Omas ayaa kormeer indho indhayneed kutagay degmooyin kamid ah 2da gobol ee qoraxey iyo doolo si ay u soo indho indheeyeen mashaariicaha horumarineed ee xukuumada deegaanku ka hirgalisay islamarkaana ay doorkooda kaqaataan iyagoo qurbajoogtu dhagax dhigay dugsi hoose, dugsi-sare iyo waliba xarun caafimaad.
Hadaba, maareeyaha wakalada xidhiidhka qurbajoogta DDSI mudane badri yuusuf Omas oo arbaahinta deegaanka u waramay ayaa sheegay in waftigan ay ujeedadoodu tahay si u soo indho indheeyaan adeegyada horumarineed ee laga hirgaliyay degmooyinka iyo tuulooyinka ay kasoojeedaan. Wuxuuna intaa kudaray in qurbajootani ay aad ugu riyaaqeen adeegyada horumarineed iyo kaabayaasha dhaqalaha ee sida waxbarashada caafimaadka, biyaha nadiifta ah.
Dhankooda, waftigan qurbajoogta ah ayaa sheegay in ay mareen degmooyin iyo qabaleeyo kaladuwan oo kamid ah gobolka doolo iyo qoraxey ilamarkaana ay lakulmeen horumar balaadhan oo kahirgaliyay meelahaas ay taeen haday tahay waxbarasho caafimaad iyo biyo. Waxayna tilmaameen in dawladu kaalinteedii ay 100% kasoobaxday iyaguna ay kaqaadanayaan kaalinta kaga aadan. Waxaya dhagax dhigeen mashruuc dhismo oo ah dugsi hoose, dugsi sare iyo waliba xarun caafimaad.
Sikasatba ha ahaatee, waftigan qurbajoogta ah ayaa socdaalkooda wali ku sii socda qabaleeyada iyo tuulooyinka degmooyinka gobolka qoraxey iyo doolo iaygoo bulshada shirar kalalduwan layeelanaya.